Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal एमसिसि भन्दा खतरनाक यो माहामारी, अन्य देशमा विरोध प्रदर्शन भईरहँदा नेपाल किन मौन ? - Pnpkhabar.com
विश्व बस्नेत वरिष्ठ कलाकार/काठमाडौं, १४ साउन : एमसिसि भन्दा धेरै गुना खतरनाक हो यो झुटा माहामारी । युरोप, अष्ट्रेलिया, भारत लगायत देशहरुमा यसको विरोध र प्रदर्शनहरु भईरहँदा नेपालीहरु किन सुतेर बसेका होलान ? यो रोग लागेर मर्ने सम्भावना २४ वर्ष सम्मकालाई शुन्य बराबर छ भने अन्यलाई ९९.९७ प्रतिशतको हाराहारीमा सुरक्षित छ ।
यो कुरा सिडिसि कै वेवसाईट्मा हेर्न सकिन्छ । यो प्यान्डेमिक नभएर मानव जाति माथि नै ऐले सम्मको सबै भन्दा ठुलो षडयंत्र हो भनेर विश्वका उच्च डाक्टर, वैज्ञानिकहरुले भनिरहेका छन् । यस कुरा प्रति गम्भिर नहुने, बुझ्न नचाहने र खिल्ली उडाउनेहरु पछुताउने छन् यो मानव जनसंख्या नियंत्रण गर्ने महाषडयंत्र हो । तर यहाँका डाक्टरहरु भने यस बारे अनभिज्ञ छन् ।
आफूले पनि सुई हानि सके अरुलाई पनि हान्न प्रेरित गरिहेका छन् । भिडियोले यस बारे १०० प्रतिशत झुट र भ्रम फैलाईरहेका छन् । केहि अनुसन्धान गरे यि सबै कुरा आफै थाहा हुन्छ खोज गर्न र सत्य तत्थ्य थाहा पाउन ईच्छा भएमा । आफैले खोजी गर्न अल्छि गरेर अरुले भनेको कुरामा भर गर्नेहरुलाई ठुलो झट्का लाग्ने निश्चित छ ।
मेरो कुरा विरोध गर्नेहरुलाई यो भन्न चाहन्छु सुई हान्न लगाउने सबैको मुनाफामा आधारित स्वार्थ छ । सुई हानेर गल्ति गरिसकेकाहरुलाई यस्तो कुरा सुन्न र बुझ्न चासो हुँदैन र उनीहरु आफूले गरेको गल्ति स्विकार गर्न चाहदैनन्, ईगोको प्रब्लम हुन्छ । यि सबै कुराहरु जानकारी गराएर मलाई न एक पैसाको फाईदा न कुनै स्वार्थ छ, यो कुरा बुझनु सबैले ।
सिर्फ मानवताको नाताले भन्न लागिरहेको हो । गुन देख्नेले देखुन नदेख्नेले सरापलान तर सत्य कुरा अलिक पछि थाहा भईहाल्छ । त्यति बेला गल्ति भएछ भनेर नरुनु । यस बारे विस्तृत जानकारीको लागी मेरो पिडिएफ फाइल डाउनलोड गरेर हेर्नु । यस बारेमा हामी सरकारी टोली र डाक्टरहरुको समुहसँग वहस गर्न तयार छौ । त्यस तर्फ पहल गरियोस् ।